Ongororo Xiaomi Redmi 5 Plus Smartphone Review - Secure Choice
Tinawo nemutauriri we-smartphone weXiaomi wakabudirira kunyanya pane zvaunopa uye mutengo uri.
Asi ichokwadi here?
Nguva dzose zvakanaka kuti uve nemanzwiro ako ekutora smartphone kubva mubhokisi rako, kunyanya kana tine icho paruoko uye rinoratidzika kunge raive rakakodzera kare mari inotengeswa mairi.
Hongu tinotaura izvi nekuvaka kuva aluminium uye kuva nechinangwa kunyange chiri nyore, chinoshamisa asi icho chinonyanya kuzivikanwa nechemberi chakafanana neRedmi Note 3 uye 4.
Misiyano ndeyokuti kamera inomiririra kunze kwevanoratidzwa mazita.
The pamberi kuchinja, zvikurukuru nokuti ikozvino Xiaomi bheji ari muenzaniso uyu chidzitiro reshiyo 18: 9 uye chidzitiro micheto vari curved, zvino pezvitsiga vakawanda bheji.
Sezvambotaurwa, muviri unonzi aluminium asi semhando dzakataurwa, dzine mapepa epurasitiki kumusoro uye pasi nechekupedzisira kwechigadzirwa, mitsara yakaitwa yealuminium.
Uhu ndihwo 8,1 mm, pasinei nokuti inopa manzwiro ekuve akacheka zvishoma izvo zvinotanga kuva zvinonakidza mune izvozvi.
Kurema kwayo ndeye 180 gramu, zvingaratidzika zvakakura asi hazvisi, zvakapiwa kukura kwechigadzirwa.
Zvinonzi akacherechedza kuti ane inzwi chinoshamisa ruvara, iro vanoratidza uye IPS (nevakawanda midrange midziyo dzakawanda), chisarudzo chokuva 2160 × 1080 uye arambe achirema pamusoro 409 Pixel zvinoratidza kuti chiri midziyo iyo asingatadzi tinofanira kunetseka unhu kana totaura kuratidzwa.
Size ndiyo 5.99 nemainji, kwechokwadi kuti wakakwidzwa vane smartphones pedyo 6 6 padiki kana kunyange masendimita, asi ichi smartphone kufunga kwezvatiri zvakakwana.
Kushandiswa kwesikrini mu 5.99 inches i77.4%.
The processor ari Qualcomm Snapdragon 625, mumwe processor zvakanaka kukosha kuti ndiye smartphone, asi tinofunga kuti Xiaomi aigona bheji musi Snapdragon 626 iyi mhando yokutevedzera.
The GPU kuti unouya processor uyu Adreno 506 kuti zvakakwana mukova vakawanda mitambo kana mafomu kuti wakaedza, asi chokwadi, pasisina chero hondo machine.
Pane shanduro mbiri, 3GB / 32GB kana 4GB / 64GB, izvo isu akaedzwa ndiro 4GB / 64GB uye zvishoma zvokutaura, vakaita chaizvo zvakanaka, kunyange ose mabasa kana kuita multitasking, izvo tinotenda 3GB VERSION / 32GB kushanda uyewo ichi.
Sezvakataurwa, pane shanduro mbiri, pano zvinoenderana kana zviripo kutora rebei kuti shanduro 4GB / 64GB, mhinduro iri hongu kufungisisa tsika kuti kutsaura chimwe kubva mumwe haasi mukuru uye nguva dzose zvakanaka kuti kaviri kuchengetera sezvakunoitwa RAM havazodyari zvokuti musiyano.
Iko "chaiyo" nzvimbo inowanika yatinayo pane zvigadzirwa zvedu inobva ku55,94 GB uye sezvainozivikanwa inobva pane imwe device kudivi.
Iwe unogona kuwedzera chigadziro nekuwedzera micro-sd kadi kusvika ku 128 GB yepace.
Kana iwe uchida kushandisa memori khadi, yeuka kuti unofanira kubvisa wechipiri SIM card slot.
Xiaomi aigara akanga To ake zvikwereti izvi, kunyanya kuwanda redmi, ichi hazvirevi kunzvenga uye ane bhatiri naRaama 4000, riri kupfuura zvakakwana kuti kushandisa 2 3 mazuva mazuva zvine mwero pakushandisa.
Kushandisa zvakasimba kunogona kutsigira pakati pe5 nemaawa 6 ayo akanaka kwazvo, kubva pakuitamba, achishandura maitiro evanhu uye kutarisa mavhidhiyo.
Mutoro unogona kutora kubva ku 15% kana kupfuura 2 hooras nemaminitsi 10.
Chimwe chezvikamu izvo zvatove zvakasvibirira mukati memajeri ose, sensor fingerprint, inopindura zvakanaka, inodzokorora kakawanda uye isingakundiki, chinhu chakasimba pane izvi.
Iyo GPS inotaurira, yakanga isina zvikanganiso pairi kushandiswa.
Zvino isu kutaura zvatinofunga zvingava simba pfungwa midziyo, vane Micro-USB, kuti zvizivikanwe kuti nechekare makatanga kuvimba zvakawanda pamusoro simba iri Type-C, sezvazvakaita somuenzaniso muna Xiaomi Mi A1 uye kuti kuzeza zvikuru kuna mutengo muenzaniso uyu, ine fanana nokurondedzerwa.
Chimwe chezvisarudzo izvo Xiaomi akaisa ndiyo inonzi infrared sensor kuti itungamirire TV yedu, iyo inenge inenge yose yezvigadzirwa zvechangopfuura zvechirwere uye izvi hazvisi izvo, nerufaro.
I3.5 mm jack iri pamusoro pekushandisa.
Kune avo vanoda kuteerera mimhanzi vasina headphones, havafaniri kunetseka nezvehutano zvachose nokuti vane unhu hwakanaka hwehutano.
Kunyange zvazvo usingaiti chimiro, hapana mubvunzo kuti iwe hauzove wakanetseka kunyange kuisa iyo yepamusoro pamusana nokuti haikanganisa zvachose.
I-smartphone haina kupukunyuka muedzo weAnTuTu uye yakave nekwangwani pamusoro pePoint 76.000, iyo yaitarisirwa, ichishandisa purojekiti pakati pezvimwe zvinotaurwa zvataurwa kare.
Sezvo imi munoziva Xiaomi ine yayo inowanikwa uye muchina uyu pakutanga vakauya MIUI 9.2 7.1 kwakavakirwa Android (nougat) sezvaunogona kuona mumufananidzo pazasi.
Kamwe yakashandurwa iwe unenge uine MIUI 9.5 sezvaunogona kuona.
Iwe unogona kunge uchiwana update ye MIUI iyo inenge iine Android Oreo.
Mutambo: Asphalt Xtreme
Mutambo wakashanda zvakakwana usina kushambadzira nemhando ipi zvayo yekugadzirisa kana kugadzirisa mifananidzo.
Chiitiko chacho chakanga chakanakisisa.
Mutambo: Kupfuurira Kuparadza
Mutambo mumutambo weC CS: GO, asi shanduro yeshandiswa iyo yakashandawo zvakanaka, kunze kwezvikwata zvaive nezvo asi zvakakodzera kunyange kumutambo uye kwete kumidziyo.
Kunze kwekuti, tichiri kuedza mamwe mimwe mitambo sezvatinoita nguva dzose uye ivo vose vakapfuura. Asi zvechokwadi zvakakosha kuyeuka kuti kana iwe uchivandudza maikirwo emitambo yakaoma seyaPUGB kana Mitemo Yokupona, pachava nekuputsa kwakasikwa, tinotaura nezvemashoko akafanana.
Nenzira yekuti iyi yaiva imwe yezvishamiso, pano kuratidza kuti Xiaomi ari kurwisana neiyo yakanga isinganyanyi kukosha yezvigadzirwa zve brand.
The chikuru kamuri iri 12 MP vaine aperture kuti f / 2.2, tinogona kutaura kuti kamera-musuo uyewo uye murima kare kunogona hwakanaka zvichienzaniswa somuenzaniso kune Xiaomi redmi Cherechedza 4, pane musiyano akanaka, Zvisinei havatarisiri zvishamiso zvakajeka.
Heano mifananidzo miviri kuratidza humwe hutano hwahwo.
Kuti tibatsire mumifananidzo yakajeka tine Dual-Flash.
Zvinoratidza kuti kambani haisi kungoda kupa mafoni asiri ega asi kuti vane unhu muzvinhu zvose, kuitira kuti varambe vachikwanisa kuwana vamwe vafudzi nenyika.
The kamera kumberi 5 MP anoita basa rayo kutora selfies asi hapana kunoshamisa, murima runyararo hakuna kuipa, sezvo chiedza kwakaita pamberi anogona kubatsira dzimwe nguva.
Mhedziso ndeyokuti hongu, zvakakodzera pasina pasina mubvunzo.
Unhu hwekona racho hunozvitaurira pachako, kunyange pasina chinhu chingave chakataurirwa kupa mutengo wemidziyo, zvinogona kutema mamwe mafoni anonyanya kuwanda.
Izvi zvichava rakanakira vaya havadi kushandisa zvikuru uye kuva pakati nepakati midziyo yose zvinhu, kungava chimwe chezvinhu nepakati mudziyo, iyo kwakaoma chaizvo kupa kunaka pfungwa, asi izvi hazviiti Zvisinei kuti tikanganwe zvakakwana.
Chimwe chinhu chisina kunaka chatakanyanya kuwedzera ndechokuti tive ne Micro-USB asi iyo yakaipa zvishoma, tichifunga nezvezvose zvatinotarisa mukutsvaga uku.
Nyaya yakajeka zvikuru kumidziyo.
Kana iwe uchida kupedza zvishoma uye uine midziyo yakanyatsonaka, tinokurudzira zvikuru iyi smartphone.
Tenga Xiaomi Redmi 5 Plus